Degso Wise Care 365 loogu talagalay Windows
Degso Wise Care 365
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (16.80 MB)
Degso Wise Care 365,
Barnaamijka Wise Care 365 waa barnaamij fuliya dayactir si uu u maamulo goobaha diiwaanka ee kombiyuutarkaaga, diskka iyo aaladaha kale ee habka ugu hufan. Waxaad isticmaali kartaa barnaamijka, oo aad u fudud in la isticmaalo, si kor loogu qaado waxqabadka kombiyuutarkaaga si muuqata.
Soo degso Daryeelka Wise 365
Wuxuu Ilaaliyaa Nidaamkaaga Waqtiga dhabta ah - Qaad tallaabo degdeg ah marka barnaamijyada qaarkood isku dayaan inay isbeddel ku sameeyaan oggolaansho laaan. Ilaaliyuhu wuxuu ogaadaa oo joojiyaa habab kasta oo isku dayaya in si qarsoodi ah wax looga beddelo diiwaanka Windows. Waxay ka hortagtaa in bogga internetka ee biraawsarkaaga la beddelo. Waxay ka hortagtaa codsiyada cusub ee aan la rabin in lagu daro bilowga Windows. Waxay ka hortagtaa is -beddelka barowsarka caadiga ah.
Nadiifiyaha PC -ga oo Dhammaystiran (Hagaajiyay) - Daryeelka Wise 365 waa barnaamijka xulashada balaayiin qof oo adeegsada Windows ah oo doonaya inay kombiyuutarradooda Windows ku hayaan waxqabadka ugu sarreeya. Waxay xawaareysaa kombiyuutarka gaabis ah waxayna ilbiriqsiyo ku sii daynaysaa meel diskiga adag ah. Waxaad ka saareysaa diiwaannada diiwaangelinta Windows ee aan ansax ahayn, keydin iyo soo celinta diiwaanka Windows si fudud. Waxay nadiifisaa faylasha ku -meelgaarka ah ee Windows, waxay nadiifisaa daalacashada (Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari iyo kuwa kale), kaydadka, soo dejinta taariikhda, taariikhda daalacashada, buskudyada, furayaasha sirta ah. Daryeelka Wise 365 wuxuu nadiifiyaa gaagaabyo aan sax ahayn, faylal qashin ah oo ay abuureen barnaamijyo kale. Baadhitaanka nidaamka oo dhan si loo nadiifiyo faylasha leh fiditaanno gaar ah.
Qalabka Kor -u -qaadista Nidaamka ugu Dhaqsaha badan Adduunka - Daryeelka Wise 365 wuxuu adeegsadaa teknoolojiyadda ugu fiican adduunka. Waxay hagaajisaa waxqabadka PC -ga, disks -yada khaladaadka iyo diiwaanka Windows, waxayna maamushaa hababka bilowga iyo sidoo kale adeegyada. Disk -ga adag ee kombiyuutarkaaga iyo diiwaanka ayaa isku dheggan muddo ka dib. Daryeelka Wise 365 wuxuu khiyaameeyaa darawalka iyo diiwaanka si uu u hagaajiyo, taasoo ka dhigaysa in kombiyuutarkaagu si xawli ah u socdo oo xasilloon. Barnaamijyo badan ayaa aamusnaan ku shaqeeya gadaasha marka aad bilawdo kombiyuutarkaaga. Daryeelka Wise 365 wuxuu kaa caawinayaa inaad curyaamiso barnaamijyada aan loo baahnayn ee cunaya ilaha nidaamka oo kordhiya xawaaraha bilowga kombiyuutarka.
Ilaaliyaha Qarsoodiga Kumbuyuutarka Ugu Dambeeya - Daryeelka Wise 365 wuxuu ka ilaaliyaa asturnaanta kombiyuutarkaaga indhaha wax arkaya. Eraser Asturnaanta ayaa tirtiraysa dhammaan raadadkii hawlgal kombiyuutar kasta sida taariikhda daalacashada iyo faylasha la helay, sidaa darteed hawlgal kasta oo kombiyuutar ah oo aad samayso wuxuu ahaanayaa mid gaar ah. Disk Wiper wuxuu ka hortagaa in xogta la tirtiray ay soo ceshadaan dhinac saddexaad. Disk Shredder wuxuu gabi ahaanba tirtiraa faylasha si aan marna loo soo kaban.
Nidaamka Awoodda leh iyo Qalabka Korjoogteynta Qalabka - Kormeerka Nidaamku wuxuu soo bandhigayaa dhammaan macluumaadka aasaasiga ah ee kombiyuutarkaaga. Monitor Monitor wuxuu siiyaa dadka isticmaala liis cad oo abaabulan dhammaan hababka ay fuliyeen isticmaalaha iyo nidaamku, adeegsadayaashu waxay xiri karaan nidaam kasta oo aysan u baahnayn si ay kumbuyuutarku si habsami leh ugu socdaan. Guudmarka Qalabka wuxuu siiyaa dadka isticmaala macluumaad kooban oo faahfaahsan oo ku saabsan dhammaan qaybaha qalabka muhiimka ah, oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay ogaadaan kombiyuutarkooda jaleecada. Nidaamka hawlgalka, astaamaha Windows (nooca, nooca, taariikhda rakibidda, dhismaha), taariikhda, qaabka iwm. Waa tab cusub oo lagu daray oo soo bandhigaya soo koobitaanka tilmaamaha Windows sida
Wise Care 365 Noocyada
Cabirka Faylka: 16.80 MB